Ukuphupha ngeYacht Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
I-yacht luhlobo oludumileyo lwesikhephe kwimidlalo okanye ekusebenziseni ulonwabo. Kukho izikhephe zoyilo ezahlukeneyo. Zahlulwe zaziinqanawa ezihamba ngeemoto kunye nokuhamba ngesikhephe ngohlobo lwazo lokuqhuba.
Kuxhomekeka kwiimfuno zabanini, kukho iilwandle ezilula, kodwa kunye nezikhephe zodidi ezivumela ubomi obumnandi kakhulu kunye nobutofotofo emanzini. Uhambo lwesikhephe liphupha, elibonakala rhoqo. Imida yemida ithatha isigqibo kutoliko olubanzi lwephupha. Ke ngoko, umphuphi kufuneka azibuze emva kokuvuka ukuba zeziphi iinkcukacha eziza kubonakala kwiphupha le-yacht.
Kwinqaku elilandelayo uza kufumana lonke ulwazi olubalulekileyo malunga nentsingiselo yephupha lakho lomkhumbi. Okokuqala, singathanda ukukubonisa umfanekiso ophuphayo ovela rhoqo: i-yacht enkulu entle.
1 Uphawu lwephupha «Yacht» - Awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
1.1 Inqanawa enkulu nenesidima. Umzekelo oqaqambileyo wenqanawa ephupheni!
2 Uphawu lwephupha «yacht» - ukutolikwa ngokubanzi
3 Uphawu lwephupha «yacht» - ukutolikwa kwengqondo
4 Uphawu lwephupha «yacht» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «Yacht» - Awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
Inqanawa enkulu nenesidima. Umzekelo oqaqambileyo wenqanawa ephupheni!
Abantu bahlala belangazelela ukwamkelwa, imali kunye nokuzonwabisa. Iminqweno enjalo inokubonakaliswa ephupheni lechweba elikhulu nelikhulu. Ukuba nezikhephe kwi el mundo yamaphupha alumkisa ngokuphoxeka kunye nelahleko ngokwenyani: ukuba awunathamsanqa, okuchaseneyo ngqo kunokwenzeka kwinto ebonakala ngathi inokwenzeka ngequbuliso ekufikeleleni kumava ephupha.
Uphawu lwephupha «yacht» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngokophando lwamaphupha, uhambo kwizikhephe lunokuqulatha izicwangciso zeshishini. Ukuba ukukhwela esikhepheni kuthe cwaka, oko kuthetha ukulala. Suerte Kwaye impumelelo. UKUYA Ukuphoxeka Kwenzeka xa ulwandle luba mandundu kwaye amaza aphezulu enza.
I-yacht yamaphupha ikwangumqondiso welizwe elinemvakalelo lokuphupha kunye nendlela yakho ebomini. Umnqweno woku utshintsho Ikwahlala iqhagamshele kwi-yacht kule meko.
Kule meko, isilumkiso ngokubanzi kubonakala ngathi asitshintshi nantoni na ngokungxama, kodwa endaweni yoko cwangcisa kakuhle kuqala. Oku isilumkiso Ihlala izibonakalisa kwisaqhwithi nakwinkungu okanye kwanaxa iyitshon. Ukutshiswa okanye ukutshona kwezikhephe ikwangumqondiso wesibetho esibi sekamva kunye neendaba ezimbi.
Ukuba iphupha likwi-yacht engalunganga, ke lo mfanekiso wephupha ubonakalisa ngokucacileyo ukuba kuya kufuneka ujonge kwakhona iinjongo zakho kunye nezicwangciso zakho. Ngokucacileyo bekukho isigqibo esingalunganga.
Uphawu lwephupha «yacht» - ukutolikwa kwengqondo
Ukuba i-yacht okanye inqanawa ngokubanzi ibonakala ephupheni, ke ukutolikwa kwengqondo kwephupha kuhlala kulibona njengomfuziselo walonto. Uhambo lobomi yokuphupha. Ikhosi yohambo kwihlabathi lamaphupha ikwabonisa inkambo yohambo lobomi kwihlabathi elivukayo. Eminye imifanekiso yamaphupha ihlala ibonakala apha, ekufuneka kuboniswene nayo malunga nokuchazwa kwephupha.
Ukuba i-yacht ihamba ngokukhawuleza, emva koko uhambo lobomi bephupha aluyi kuba nangxaki. Nangona kunjalo, ukuba i-yacht inobunzima okanye umonakalo obangela ukuphazamiseka kohambo, oku kuyakwenzeka kuhambo lobomi bephupha. Ke ngoko, ayisayi kuhlala ihamba phambili ngokukhawuleza, kodwa iya kugcinwa iphindaphindwe.
Ukuba umntu ophuphayo kuphela komhambi kwizikhephe, kunokuba sisalathiso kuye u lonwabo kufutshane ebomini bokuvuka.
Uphawu lwephupha «yacht» - ukutolika kokomoya
Ukuba i-yacht ibonakala njengephupha, ke ukutolikwa kwephupha lokomoya kukubona njengophawu lwe Tod kunye nesimo sengqondo umntu anaso ngakuye.
I-yacht inokusetyenziselwa Ukuchuma njengaye Iihambo kuba.